Rosiana mpizahatany efatra no novonoina, 16 naratra tamina loza voajanahary tamin'ny Tour Tour Turki
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Turkey Breaking News » Rosiana mpizahatany efatra no novonoina, 16 naratra tamina loza voajanahary tamin'ny Tour Tour Turki
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News
Araka ny tatitry ny polisy Tiorka, ny mpamily ilay tratra niaraka tamin'ireo mpizahatany rosiana 22 tao an-tsambo dia tsy voafehiny intsony ny fiara ary nandeha namonjy ilay lalana ho avy izay nihodinan'ilay fiara fitateram-bahoaka.
Naratra ireo mpizahatany noho ny fianjeran'ny bus fitateram-bahoaka tany Antalya, Torkia.
Ho an'ny olona maty, 16 naratra, raha ny tatitra voaray.
Rosiana 22 no mpizahatany ao amin'ilay fiara fitateram-bahoaka nianjera.
Bus iray nitondra mpizahatany vahiny nivadika tany amin'ny faritany Tiorka Antalya.
Ny zava-doza dia nitranga tany amin'ny faritra Side ny alatsinainy hariva 2 aogositra tokony ho tamin'ny 6 hariva ora eo an-toerana, akaikin'ny tanànan'i Manavgat. Ny bisy dia nitondra mpizahatany rosiana avy ao amin'ny vohitra Konakli mankany Seranam-piaramanidina Antalya - ireo mpitsangatsangana dia tokony hiverina an-trano mody any Russia amin'ny 9:50 alina alina.
Araka ny tatitry ny polisy Tiorka dia tsy voafehy intsony ny mpamily ary nitondra ny làlana ho avy izay nihodinan'ny fiara fitateram-bahoaka.
Misy mpizahatany Rosiana 22 ao anaty bisy izay nahavita ny vakansy tany Antalya.
Mpandeha mpitatitra bus efatra no maty tamin'io fianjerana io, enina ambin'ny folo no naratra.
Raha ny filazan'ny mpandraharaha mpizahatany Rosiana Intourist dia nomena ny tra-boina rehetra ny fanampiana ilaina rehetra. Amin'izao fotoana izao, ny mpizahatany rehetra dia ao amin'ny hopitaly efatra any amin'ny faritanin'i Antalya. Manazava ny vaovao momba ny toetran'ireo niharam-boina. Tsy mahatsiaro tena marary mafy ny mpamily.
Tsy ity no loza voalohany niseho tamin'ireo mpizahatany rosiana tany Torkia tato anatin'ny volana vitsivitsy. Ny 10 aprily tamin'ity taona ity dia vehivavy Rosiana iray no maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tao Antalya, Torkia. Rosiana mpizahatany 26 amin'ny 32 ao anaty bus no naratra tamin'io fianjerana io.